विदेशी पर्यटक र विद्यार्थी कहिलेबाट छिर्न पाउँछन् अष्ट्रेलिया ? - Vishwanews.com
विदेशी पर्यटक र विद्यार्थी कहिलेबाट छिर्न पाउँछन् अष्ट्रेलिया ?
सिड्नी । अस्ट्रेलियाले विदेशी पर्यटक र विद्यार्थीका लागि आफ्नो मुलुक खुला गर्ने तयारी गरेको छ । अष्ट्रेलियाका कार्यवाहक अध्यागमन मन्त्री एलन टजले अब सुरक्षित तरिका अपनाएर विदेशीलाई अस्ट्रेलिया प्रवेश अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
कोभिड १९ को प्रभावका कारण आठ महिनादेखि अष्ट्रेलियाले विदेशीको अनुमति रोकेको छ । अब भने प्राथमिकता हेरेर खुला गरिने उनले जानकारी दिए उनका अनुसार सबैभन्दा पहिला भिषा लागेर बसेका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई सुरक्षित रुपमा बिस्तारै अस्ट्रेलिया आगमन अनुमति दिइने भएको छ । पर्यटक र सर्वसाधारणलाई भने कोरोनाबाट सुरक्षित राष्ट्रहरूको प्राथमिकता हरेर खोलिने भएको छ ।